health care reform act summary: cara menurunkan berat badan dengan cepat dan berkesan
Posted on Thursday, March 27, 2014 by Lisa Fernandez
cara menurunkan berat badan dengan cepat dan berkesan Esi ida ibu ngwa-ngwa i nwere ike isi na-agbalị na-esonụ ma ọ bụrụ na a n'ọtụtụ ụzọ , ma nakwa jisiri ike kwụsị ọdụdụ nkwụnye ego gị idem. N'ezie , ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụrụ na onye obula nkịtị chọrọ ozugbo arọ furu a mkpirikpi oge. Ma, iji mee ka nke ahụ mee gị, ị ga na-alụ ọgụ n'ezie mmezi ike iji kacha utịp.
Ọ bụ na-ekwu "Ọ dịghị Mgbu nweghị uru ", a ga-enwe ihe ịga nke ọma ọ bụla na-enweghị ike mgba . Ọ bụrụ na ọtụtụ nri mmemme na ị na-agba ọsọ site ụnyaahụ adịghị ayarade ikeike pụta , mgbe ahụ, i nwere ike na-agbalị ole na ole iji ida arọ n'ike n'ike na-esonụ . Nwere mmasị iyi ya ? Na-aga ịhụ ihe na-esonụ nyochaa .
Ikekwe, ọtụtụ n'ime anyị ike jog ke usenubọk ruru ka iti -eji ọrụ n'aka ọrụ ma ọ bụ e umengwụ bilie gboo. Mgbe ahụ ị nwere ike ịgbanwe gị jadwah jogging n'ehihie . Ị kwesịrị ị na -eme nke a mgbe niile kwa ụbọchị n'ihi na ọ dịkarịa ala minit 30 , ntre ke calories a ga- akpọ ndị kwekọrọ nnọọ . E wezụga jogging bụkwa egwuregwu na free si otú a na-azọpụta na-eri .
Na-eme ihe niile ha nwere oru omume
Site ugbu a na-agbalị ime oru omume nanị, sitere na site mopping , Ibulite , saa ákwà na -eme kwa ụbọchị -eme ke ufọk. Ọrụ nwere ike ịchọ mfe , ma na-eme ndị a eme na ị ga na- na- na-akpụ akpụ na -egosipụta .
Isi ike egwuregwu oge
N'ihi na kacha pụta , ị kwesịrị ị na ikesiike gị ihe omumu oge . Ọ bụrụ na ị na-emekarị gaa mgbatị ahụ na mgbe ọnọdụ, oge a ị kwesịrị ị na -agba mbọ na-aga mgbatị ahụ ugboro atọ n'izu . Gbado anya na omume ndị nwere ike ire abụba ọsọ ọsọ karịa otú mee ka gị aro ala.
10 puku nzọụkwụ ụbọchị ọ bụla
Na- ekwesị ike ahu , ị na-agbalị berkalan 10 puku nzọụkwụ kwa ụbọchị. I nwere ike iri uru nke nzọụkwụ counter gụọ ole nzọụkwụ ị mere daily.You nwere ike ịmalite ụgbọala ma ọ bụ a ogbatumtum parked ụfọdụ anya n'ebe njedebe gị ma ọ bụ mee mkpagharị ruo ebe adịghị oke n'ebe dị anya .
Sịn ibu ọnụ ọgụgụ n'ime ụlọ
Mgbe niile ijide onwe gị aro site ele akpịrịkpa , n'ihi ya, ị ga- agaghi Agbaghara ike nyochaa ọ bụla mgbanwe gị ibu. Tinye n'ime ụlọ ma ọ bụ ebe ị na -emekarị ịga .
Ihe kacha mkpa ná adịkwa aro bụ ruo mgbe ị ghara iri nri na ihe niile dị n'ihi ya ibu bụ ngwa ngwa na- ebughibu idem. Nri ahụ ga- site -ewe a nri ọgaranya eriri ma họrọ ihe oriri ndị dị mma gị na ahu .
Ọ bụrụ na ị nwere ibu nsogbu mgbe nnyefe , ị nwekwara ike na-agbalị otú ida arọ n'enweghị mgbe na-amụ nwa nke mere na belata ibu ozugbo. Ya mere, gịnị ka ị na -eche ? Tergat unu anya na-aghọta n'ụzọ ida arọ ọsọ ọsọ n'elu.